I-Ceramic Insulator yokuguqula i-Ignitor Discharge Tube China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Vula i-Ceramic Component > I-Ceramic Insulator yokuguqula i-Ignitor Discharge Tube
I-Ceramic Insulator yokuguqula i-Igniter Discharge Tube
I-Ceramic insulator ye-switch igniter discharge tube yenziwe nge-alumina oxides ne-min. Ukuhlanzeka okungu-95%, Kungenziwa ukubunjwa ngokucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-ISO. Esikhathini esivamile, kokubili i-molybdenum-manganese ne-Tungsten njengethandani ethandwa kakhulu yensimbi yokugcoba kufanele yenziwe phezu komzimba othile we-ceramic body nge-banding, ukushicilelwa kwesikrini, ukuxubha, ukupuniza ukuhlangabezana nokusetshenziswa kwesibhakabhaka phakathi kwensimbi ne-ceramic.
Umzimba wensimbi we-ceramic unamandla amakhulu okubambisana ne-airtightness ekahle ku-ceramic kuya ku-tech jointing technology.
● Amandla obuhle obubambisene nezinga elihle lokuvuza ● I- Dense, engeyona emithandayo futhi iphinde igweme
● Ukukhululeka kokukhulula ivolumu ● I-coefficient ephansi yokwandiswa
● Ukuphikisa ukuhlasela kwamakhemikhali ● Ukumelana nomlilo nokungahambi kahle
Ngezakhiwo zabo eziyingqayizivele kwezobuchwepheshe, kagesi kanye nokushisa. Lezi zingxenye ze-ceramic zivame ukusetshenziselwa ukuphazamiseka okuphazamisayo, amashubhu e-Electron, i-Gas discharge tube, i-vacuum capacitor, I-Vacuum thyristorsSula iziboshwa, ama-Thyristor housings, ama-hoode housings, Amashubhu wegridi yamandla, Ama-tubes ahamba phambili, amasongo okufaka umshini kanye ne-cylinder, amashubhu e-X kanye Amadivaysi ahlukahlukene aphefthiwe asekelwe kuhlelo lokusebenza lokuphazamisa.
Sakha ububanzi obuningi be-ceramic insulator, obunamathebhu we-ceramic ensimbi, i-substrate ene-metallic ceramic ring, nokunye okunjalo.
Sinezindlu zangaphakathi esiphelele imishini yokukhiqiza ephelele kusukela ekubunjweni kokukhipha amandla, noma yikuphi, kuyisidingo sokubambisana noma iphrojekthi ephansi, sikholelwa ukuthi singasiza ibhizinisi lakho.
A: Sihlale sisekela isidingo esenziwe ngokwezifiso ngokulinganisa okuhlukene, ukuklama kanye nokuhlanganiswa kwe-metalli nokufaka.